Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka, maxay yihiin cuntooyinka caadiga ah? | Safarka Absolut
Markaad u safreyso waddan kale waxay u badan tahay in waxa aad rabto ay tahay inaad ku raaxeysato gees walba oo ka mid ah meeshaas cusub. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda caloosha caloosha ee gobolka Kariibiyaanka. Dadku waxay jecel yihiin inay ogaadaan meelo cusub waana taas sababta aan u jecel nahay safarka. Safarka kadib, waxaan mar walba ku laabanaa gurigeena, barta aan ka bilowno ... laakiin waxaan ku laabaneynaa isbadal, maxaa yeelay koone kasta oo adduunka ka mid ah ayaa waxyaabo cusub ku soo kordhin doonta nolosheena iyo habka aan u aragno adduunka, sidaa darteed shaki la'aan, suxuunta caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka Waxay kaa caawin doonaan inaad kula soo noqotid dareenkaas.
Waxay sidoo kale ku dhacdaa caloosha. Markaad u safreyso dal cusub waxaad ogaaneysaa gastronomy oo aan shaqo ku lahayn – caadi ahaan- gastronomy-ka dalkeenna asalka ah. Xiisaha iyo rabitaanka ah inaan helno dhadhan cusub ayaa nagu riixaya inaan ogaano caloosha meelaha aan booqano.
Haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto Kariibiyaanka, waxaan hubaa marka lagu daro ku raaxeysiga dhulkeeda qurxoon iyo xeebta paradisiacal, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad ku raaxeysato dhammaan cuntooyinka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka. Haddii aad horey u sii diyaarisay safarkaaga, sii wad akhriska maxaa yeelay marka xigta waxaan ka hadlayaa caloosha caloosha ee gobolka Kariibiyaanka, marka waad ogaan doontaa waxa laga filayo iyo waxaad cuni karto markii aad halkaas ku raaxeysato fasaxyadaada.
1 Cuntooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka
2 Dhaqannada cunnada ee Kaariibiyaanka
3 Cuntada badda, mid ka mid ah suxuunta caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka
5 Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka ah ee aadan tabi karin
Cuntooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka
Jasiiradaha Caribbean-ka gastronomy marwalba waxaa saameeya mawjado kala duwan, si maanta dadka reer Karibiyaanka ahi ugu raaxaystaan ​​suxuunta isku qasan asalka, Yurub iyo dhaqamada kale ee adduunka. Dadka degan aaga waxay doorbidaan maaddooyinka aasaasiga ah inay u isticmaalaan diyaargarow badan.
Cuntooyinka sida aadka ah loogu isticmaalo caloosha waxay kala yihiin badda iyo kalluunka, kalluunka qolofta leh, hilibka lo'da, digaagga, doofaarka iyo xayawaanka monte. Dhinaca kale, waxay kaloo isticmaalaan waxyaabo kale oo dabiici ah sida yucca, mooska ama digiraha. Alaabada kale ee laga soosaaray caanaha, bariiska, galleyda ama miraha wadaniga ah iyagana waa la cunaa. Laakiin cuntooyinkaas oo dhan waxay awood u leeyihiin inay ku sameeyaan saxamo aad u fiican caloosha caloosha.
Mid ka mid ah cuntooyinka caadiga ah ee laga helo gobolka Kariibiyaanka waa sancocho Waxaa lagu diyaariyey noocyo kala duwan oo hilib ah, halka dadka asaliga ah ee deegaanka Sierra Nevada ee Santa Marta ay caadi ahaan cunaan khudradda, iyagoo ixtiraamaya nolosha xayawaanka in ka badan meelaha kale. Bariisku waa mid kale oo ka mid ah halyeeyada waaweyn waxaana lagu diyaariyaa suxuun kala duwan sida: elarroapastelado, bariis leh carsaanyo ama bariis duban.
Dhexdeeda gastronomy ma dhaafi kartid cabitaannada iyo ruushka Waa midka ugu caansan, in kastoo cabitaannada miraha dabiiciga ee kala duwan sida cambaha, qaraha, babayga ama biyaha bariiska sidoo kale ay caan yihiin.
Dhaqannada cunnada ee Kaariibiyaanka
Cunnooyinka Kariibiyaanka ee saxda ah waa matalaad wanaagsan oo ka imanaya dhaqammada kale sida aan kor ku soo sheegay. Iyada oo la isku daro qaabab isku dhafan, cunnada Kariibiyaanka ayaa si ballaaran loo diyaariyey si qof walba oo adduunka ah uu ugu raaxeysto.
Cuntada iyo dhaqanka Kariibiyaanka waligeed waa la beddelay markii ganacsatada reer Yurub ay addoommo Afrikaan ah u keeneen gobolka. Addoommadu waxay quudin jireen hadhaagii cuntada milkiileyaasha, sidaa darteed cuntadooda waxay ku qasbanaayeen inay dejiyaan wixii ay haysteen. Tani waxay ahayd dhalashada cunnooyinka ugu casriyeeysan Kaariibiyaanka.
Addoomada Afrikaanka ah waxay isku qaseen aqoonta dhir udgoon iyo khudradda ay ka keeneen dalkooda oo ay ku dareen miraha iyo khudradda jasiiradaha Caribbean-ka,iyo sidoo kale cuntooyinka kale ee daruuriga ah ee laga helo deegaanka. Tani waxay abuurtay suxuun badan oo kala duwan maxaa yeelay badeecooyin badan oo jasiiradaha xilligaas ku yaal ayaa aad u jilicsanaa oo aan la dhoofin karin. Miraha inta badan laga helo cunnada Caribbean-ka waxaa ka mid ah yucca, yams, cambe, iyo miraha babayga. Waxyaalaha aadka u jilicsan ee aan loo dhoofin karin waxaa ka mid ah midhaha tamarind ama mooska Kariibiyaanka.
In kasta oo cunnooyinka Kareebiya ay xoogaa basbaas yihiin, haddana waa mid ka mid ah xulashooyinka caafimaad ee ugu wanaagsan dhaqannada cunnada ee gobollada kala duwan.Jasiiradaha Kareebiyaanka waxaa ka buuxa khudaar iyo miraha,sidaa darteed nolosha caafimaadku ma ahan wax ay adag tahay in la gaaro. Intaa waxaa dheer, digirta, galleyda, chili, baradhada iyo yaanyada sidoo kale waxaa lagu soo daray caloosha, taasoo ka dhigeysa in suxuunteedu ay xitaa ka sii fiicnaadaan.
Markii addoonsiga laga joojiyey jasiiradaha, milkiilayaasha addoommada waxay ku khasbanaadeen inay helaan meel kale oo ka caawisa, sidaa darteed waxay ahayd Hindida iyo Shiinaha oo soo saaray bariis ama suxuun kaladuwan oo kala duwan oo lagu qaso cunnada caadiga ah ee Kareebiyaanka.
Cuntada badda, mid ka mid ah suxuunta caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka
Jasiiradaha Kareebiyaanka waxay ku yaalliin meel mudnaan leh waana sababta ay u leeyihiin mid ka mid ah takhasusyadooda oo loo yaqaan dhammaantood: cuntada badda. Kalluunka cusbada leh waa mid jasiirad ku takhasusay oo leh ukun la dubay.Aargoosatada, qoolleyda badda, haleyga, carsaanyo, urchins badda ...Waxay sidoo kale takhasus ku yihiin jasiiradaha oo dadku waxay ku cunaan iyagoo raaxo leh. Xayawaanadan badda ku jira ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo cunnooyinka Kariibiyaanka ah ee qalaad sida haley qumbaha qumbaha.
Macmacaanku sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah waayo-aragnimada cuntada ee Kariibiyaanka oo aad muhiim ugu ah caloosha. Sonkorta sonkorta ayaa ka mid ah wax soo saarka aagga, waana sababta ay ugu jiraan keegag badan, moofo iyo moofo aad u tiro badan. Dhaladka reer Caribbean waxay ku daraan macmacaanka dhammaan cuntooyinka. Makhaayadaha gobolladan waxay sidoo kale xoogga saaraan macmacaanka maadaama dhaqankooda,macmacaanku wuxuu muhiim u yahay saxanka weynwaana inaad u dhadhamisaa si la mid ah oo aad isla rabtid.
Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka ah ee aadan tabi karin
Soo koobid ahaan, waa kuwan liiska cuntooyinka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka ah ee aadan tabi karin:
Hilib doofaar la dubay
Digaag leh bariis
Miyaad in badan ku talin lahayd suxuunta caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka
KANI WAA GOBOLKA CARABBEAN HALKAN AYAA KU JIRA CUNOOYINKAADA NOOCYADA AH
laura machuca dijo
Waa magac dhab ah wax walbana oo ku yaal gobolka Kariibiyaanka ayaa halkan yaal
Jawaab laura machuca
gobolka carabe wuxuu hayaa suxuun qurux badan
pss gobolka caribbean ... ayaa ugufiican
sheeg laakiin hayso xog fiican
waa wax aad u qabow
suxuunta caadiga ah waa kuwo aad u macaan ok 100 boqolkiiba caribena
Waxaan kugu martiqaadayaa inaad ogaato gobolkeygu inuu yahay mid aad u qabow, caadooyinkiisa iyo cuntooyinkiisa caadiga ah
Catalina Fernanda dijo
Haye sidee tahay adiga sidee tahay waxaan rabaa inaan ku arko saaxiibo, sidee tahay lambarkaaga iyo magacaagaa sidee u qurux badan tahay waan ku jeclahay saaxiibbaday
Jawaab Catalina Fernanda
Hagaag, ra'yigeygu waa in gastronomy-ka gobolka Kariibiyaanka uu aad ufiican yahay oo qani yahay, mana ahan oo kaliya inaan qadarin karno taariikhdeeda, laakiin sida ugu wanaagsan ee aan uheli karno cuntooyinkan macaan
JOHAN CAMILO dijo
Jawaab JOHAN CAMILO
Ma garanayo waxa ay yihiin cuntooyinka caadiga ah ee gobolka Kareebiyaanka
Ku jawaab natis
Ku jawaab ingrs
Aad bay u caqli yar yihiin oo ma baran inay qoraan inaad adigu neceb tahay sida ay u cuni karaan gaaskaas
Ku jawaab isabela
Waxa aan halkan ku arko waa jahliga C:
Carolina m dijo
Waa wax karaahiyo ah, dib u eegistooda waa inay arkaan dhulkayga, way macaan yihiin, dhulkaygu waa gobolka Andean.
Ku jawaab carolina m
Kaliya Runta dijo
Ii sheeg, miyaad isku dayday iyaga maahan cunto? »Karaahiyo» Sababtoo ah karaahiyo, ma aha wax saxaro ah ama nooc sun ah? Haddii aadan aqoon, ha dhaliilin, haddii aadan jeclayn, is dhexdhexaad, jawaabtaadu waa bislaaneysaa, waa aqoonsiga dad, ummad, wax aad uga wanaagsan waxa hadda dalka ka muuqda.
Ku jawaab SoloVerdades
Si xushmad leh, sida Carolina m, fadlan jooji jaahilnimada iyo ixtiraam la’aanta waxa DALKAAGU yahay.
Sida saxda !! Jaahilnimada C:
Haddii aan u ekaano doofaarro, dib u aqri faallooyinka ama waxaad jeceshahay inaan ka soo faallono dhulkaaga habka aan u jecelnahay waana taas tan muhiimka ah !!!!!!!!!! iyo nacasnimo badan ayaa adiga iyo dhamaan jiilkiina iyo doofaarradiina ama aad kuwada hadli doontaan ugu yaraan halkan kumaanan imaan wormsssssss gobolada oo dhami waxay leeyihiin quruxdooda wax ilaahay uga soocayo iyaga oo kale si ay ugu raaxaystaan ​​uguna raaxaystaan ​​sida ay tahay !!!!!! !!!!!! Colombia ha noolaato iyo waxa ku xeeran oo dhan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ku jawaab vanesa
Gobollada oo dhami way sarreeyaan maxaa yeelay Colombia lama barbardhigo mid kale, yaan dhahno keliya Kariibiyaanka ayaa nabadeeya Andean…. Dhamaantood waa chebres sidaas darteed dhammaantood waa kuwa ugu fiican maxaa yeelay gobollada la'aanteed ma aanan ogeyn Colombia
Gerson David dijo
sida quruxda badan saxanka -.-
Ku jawaab gerson david
waxay ila ahayd chebre
huyy waxa ku farxa
Ma waxaas oo kale ayaad ku dagaallameysaa? Sidee wax lagu qoslo ah oo ay bilaabaan inay ku dhaleeceeyaan wax aysan xitaa aqoon, waxaa run ka sii badan inay ka baqayaan wax aan la aqoon. Dhinaca kale, dhaqanka hadda leh ereyadiisa "hadda", in kasta oo aan ahay da 'yar, waxay durba iila muuqataa ñero, gomelo, guizo ama dibin daabyo kasta oo kale oo ay abuuri karaan waa uun koox waxay hoos u dhigtaa heerkooda bulsheed waxayna ka dhigeysaa iyaga sidii wax yar oo wasakh ah, oo duminaya waddan qurux badan. Kaliya rabto wadankaaga, dhamaan soo bandhigida DHAQANKAAGA TAARIIKHDA, ee maahan waxyaabaha aad hada aaminsantahay in loo arko "fashions" foolxun.
Waxay u arkaan wax soo jiidasho leh ama ha ku dhahaan erayga "Gaz" ama erayga "Lafaha", waan fahamsanahay inay jiraan ereyo si fudud u galaya ereygeenna dhawr jeer markaan dhegeysto, laakiin waxay fahmeen inay leeyihiin macno dheeri ah; tusaale ahaan erayga "laf" waxaa loo adeegsadaa in wax lagu sharxo, loomana isticmaalo sida dadka qaar ugu yeerayaan kuwa kale inay yihiin dad garasho liita.
Markaan soo koobo, waxaan shaqsiyan weydiisanayaa in la ixtiraamo Aqoonsiga Dhaqan ee Umadda, waxa ay tahay oo adduunka ku qeexaya dal, oo aan ahayn sawirka xun ee ay soo saareen dhaqammada maanta dhashay.
Maaha inaan ku noolahay waagii hore, waxaan si fudud u gartay oo aan u ixtiraamayaa sida uu dalku mar ahaan jiray iyo imminka. Maanta oo kale maaha, dawladda iyo muwaadiniintu waxay abuureen muujinta wax aad uga duwan waxa uu yahay qofka reer Kolombiya ah.
Waan ogahay in faalintu dheertahay: / laakiin waan ku faraxsanahay inaan ku dhiiraday, waxaan ka mid ahay dadka u gala nacayb dartiis waxayna ku sii jirtaa madaxayga, maxaa yeelay waan fahmaa oo fahmaa markay ila hadlaan. Haddii aysan waxba kaa helin, waan ka xumahay inaan ku lumiyay waqtigaaga oo kaa dhigaya inaad tan akhrisato, laakiin waxay u ahayd sidii ugu wanaagsanayd ee aan kari karo.
sebas sebitas dijo
boggan waa tijaabo iyo jabti
Ku jawaab sebas sebitas
Hagaag, ma aqaan waxaan dhaho laakiin bogga sidoo kale ima uusan caawin
sida aan arko, horay ayaan ugu adeegay naftayda
Cuntada caadiga ah ee gobolka Karibiyaanka ee quruxda badani aad ayey hodan u tahay
Ku jawaab boni
cuntooyinkaas aniga waa i karaahsadaan waxay umuuqdaan baranbaro ku jira maraqa venezuela cuntada way ka hodan tahay
Ku jawaab lyannethpiñero
Macluumaad ku saabsan Cuba
Nalalka Woqooyiga ee Noorway, oo ah muuqaal midab leh